FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA RIDGEBACK THAI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Ridgeback Thai
Thai Ridgebacks - Julie 10 taona, Navinee 2 taona ary Mpandresy amin'ny 2 taona
Alika Ridgeback Thai
boaty laharana tahy
Ny Thai Ridgeback dia manana vatana malemy hoditra sy hozatra. Ny lamosiny dia matanjaka, mafy orina ary rakotra volo matevina. Ny loko amin'ny palitao dia misy: chestnut, mainty, manga ary volafotsy. Manana tampon-kazo eo an-damosiny izy io, noforonin'ny volo maniry amin'ny lalana mifanohitra izay mamorona tadio sy faribolana. Mahery sy hozatra ny soroka. Ny loha dia entina avo amin'ny vozony mafy, matanjaka ary voadio. Ny molotra dia miendrika volo sy bika mahery. Ny lela dia tokony ho manga na manga volondavenona. Ny sofina dia lehibe, avo lenta, telozoro, voatsindrona ary mirona mankany aloha. Ny tampon-karandohany dia fisaka ary misolampy moramora mankany amin'ny fijanonana. Ny maso mainty volontany dia miendrika amandy miaraka amin'ny endrika mailo. Mainty ny orona ary matevina kokoa ny rambony eo am-pototry miakatra hatramin'ny tendrony. Ny taolan-tehezana dia mipetaka tsara tsy misy endrika bika. Ny tongotra aoriana dia lava, somary mahia ary miondrika kely amin'ny fihinina. Ny lamosin'ny vozona dia manana horonana hoditra fanampiny rehefa mailo ny alika. Ity dia miavaka indrindra amin'ny alika kely.
Hatramin'ny farany, ny Thai Ridgeback dia mbola tsy fantatra tany ivelan'ny atsinanan'i Thailandy ary tena tsy fahita any an-kafa. Alika fiambenana, mpiambina ary fihazana ity karazany ity, nefa koa manao namana tsara. Mafy sy mavitrika amin'ny fahaizany mitsambikina tsara. Alika miasa sy mailo be izy io nefa tsy misy -piaraha-monina mety hihataka kely amin'ny olon-tsy fantatra. Angamba sarotra ampiofanina . Ny Ridgeback Thai dia mila a tompony manjaka iza no mahatakatra ny karazany. Izay manana fahefana voajanahary , amin'ny fomba hentitra nefa milamina ary matoky sy mifanaraka amin'ny fitsipika napetraka amin'ny alika . Ny tompona Thai izay tsy manitsy ny alika amin'ny fotoana mety dia mety hahita fa mampitombo fironana mahery setra ilay alika. Miaraka amin'ny mpitantana ankavanana tsy tara loatra ny famerana ny fitondran-tena tsy ilaina raha vao mianatra ny fomba hitondrana tsara ny alika ny tompony, miaraka amin'ny fanomezana ny fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana mety .
Haavony: Lehilahy 22 - 24 santimetatra (56 - 60 cm) Vehivavy 20 - 22 santimetatra (51 - 56 cm)
Lanja: 51 - 75 pounds (23 - 34 kg)
Raha ny fenitra ofisialin'ny FCI dia tsy misy fepetra takiana amin'ny lanjany.
Volo tena mahasalama.
Thai Ridgebacks dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka nampiasaina tsara. Tian'ireo alika ireo ny toetr'andro mafana ary tsy mahazaka ny hatsiaka.
Ity karazana ity dia tokony hanana fanatanjahan-tena betsaka, ao anatin'izany ny isan'andro, mandeha lavitra .
Aostraliana omby alika mpiandry ondry alemaina
12-13 taona eo ho eo.
Ankizy 5 eo ho eo
Ny Thai Ridgeback dia tsy mila fikarakarana be loatra. Ny famonoana sy fikosehana tsindraindray hanalana ny volo maty dia hanao.
Ny Ridgeback Thai dia hita tany atsinanan'i Thailand hatramin'ny taonan'ny Moyen Âge. Alika mpiambina ny tantsaha Thai. Ity alika tena miaro ity dia fantatra tsotra amin'ny hoe 'alika mpanaraka ny sarety.' Nentina voalohany tany Etazonia izy ireo tamin'ny taona 1994 avy amin'i Jack Sterling. Sendra nahita an'io karazany io izy tamin'ny fitsangatsanganana tany Bangkok Thailand. Ny alika dia nantsoina hoe Mah Thai Lung Arn, fa i Jack kosa nanomboka niantso azy ireo hoe 'Thai Ridgeback Dog' na ny 'TRD' raha fintinina. Tamin'ny 15 martsa 1994, nalain'i Jack ny zanany faralahy roa tamin'ny alika Thai vao telo azony avy eo ary TRD malaza ankehitriny mba hampisehoana ao amin'ny fampisehoana ARBA's Cherry Blossom Rare Breed Dog Show faha-3 ao Washington DC eo amin'ny Mall an'ny firenena manoloana ny tranoben'ny kapiteny nandreseny ny kilasiny niditra. Jack Sterling dia niverina tany Thailand tamin'ny 11 Oktobra 2003 hanohy ny fandaharam-piterahana amin'ny alàlan'ny kennel Chiang Mai Thai Ridgeback Dogs manafatra azy ireo manerantany.
Vondrona fanasokajiana sokajy 5 an'ny FCI (sokajy Spitz sy primitive) Fizarana 8 (Alika fihazana karazan-jaza primitive miaraka amin'ny tampon'ny havoana), Tsy misy fitsapana.
ATRA = American Thai Ridgeback Association
ATROF = Fikambanan'ny tompona sy mpanafika Thai Ridgeback
KCTH = Kennel Club of Thailand (DAT taloha)
TRCUS = Thai Ridgeback Club any Etazonia
'Saripika nalain'i James tao amin'ny Manape Thai Ridgeback: alika manan-katao nompiana ho an'ny fahasalamana, ny toetra ary ny fampifanarahana: mirehareha amin'ny alikantsika na ho an'ny fiompiana sy hanehoana ny fiezahana na hametrahana izany amin'ireo mpankafy hafa manolo-tena.'
'Mpandresy dia alika Thai Ridgeback. Ity karazany ity dia karazana primitive. Nividy azy tany Thailand izahay ary izao dia mipetraka any Netherlands miaraka amin'ireo sakaizany Thai Ridgeback 2 hafa. '
Mandresy amin'ny Thai Ridgeback amin'ny 2 taona
boston terrier pug mix sary
Nahazoana lalana avy amin'i Manape Thai Ridgeback - Sary nalain'i James
'Ity i Balto, Ridgeback Thai avy amin'ny iray amin'ireo halaintsika. Amin'ity sary ity dia manodidina ny 6 herinandro izy ary mandany fotoana amin'ireo rahalahiny sy rahavaviny 10. Tiany ny milalao ny kilalaony, fa mankahala ny mizara amin'ireo iray tampo aminy. Balto dia tena alika manjaka ka tsy namidy izy raha tsy 5 taona. Ny fianakavian'ny tompony dia tsy nanaiky ny safidiny hividy azy ary niresaka azy hanome azy namana. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Thai Ridgeback
Thai Ridgeback sary 1
Thai Ridgeback sary 2
Karazana alika Ridgeback
Lhasa Apso Dog Breed, 1
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Cairnoodle
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bergamasco Sheepdog
Fampahalalana sy sary momba ny alika Klee Kai Dog
Sarin'ny fiompiana alika Golden Retriever, 2
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika La-Chon
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana vorona maranitra
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika mpiandry alaina
sary alika pyrenees lehibe
retriever volamena telo volana
alika omby aostraliana sisin-tany collie mix alika kely
famonoana hazo miady an-tendrombohitra
cairn terrier sy ny schnauzer Mix